Introduction | Just Another WordPress Blog
Posted in Introduction, Training
Browsing these have given mealarger outlook on the topic. I hope there is plenty to come. Many thanks.!
ကို tunlinaung ခင်ဗျား။
ညာဖက်ကော်လန် မှာ Flash Version အောက်က Part I, Part II, Appendix of Part I & Part II ကို နှိပ်ရင်
Flash Version အတိုင်း ဒေါင်းလုပ် နိုင်အောင်ညွှန်း ထားပါတယ်။ မိမိ ရဲ့ ကွန်ပြူတာ Hard Disk ပေါ် ကို download လုပ်ပြီးရင် CD ထဲ ကို ပွား နိုင်ပါတယ်။ ဒီ version က ကွန်ပြူတာမှာပဲ ကြည့် လို့ရပါတယ် (လောလောဆယ်)။
TV screen မှာ Video Deck နဲ့ လည်းကြည့် နိုင်အောင် Video Version ထုတ်လုပ်နေတုံး ဖြစ်ပါတယ်။ သီးခံစောင့် ဆိုင်းပေးဖို့မေတ္တာ ရပ်ခံအပ်ပါတယ် ခင်ဗျား။ Youtube version ကိုတော့
http://www.youtube.com/watch?v=Kl7pKS94PuU မှာ ကြည့်ရှု နားထောင်နိုင်ပါတယ်။ Part I ကိုတင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျန် အပိုင်းတွေကိုတော့ ထုတ်လုပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားတဲ့ အတွက်ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။
I wanna know about Decentralization !!
Biak Tin Zul